မြန်မာပြည်၏ အကြီးမားဆုံး 4G ကွန်ရက်
*444# ကို ဖုန်းခေါ်ပါ။ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိပါမည်။ သင်၏ ဟန်းဆက်သည် 4G အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဆင်းကတ်သည် 4G မပြုနိုင်လျှင် နီးစပ်ရာ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များတွင် USIM ချိန်းနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များကို ဤနေရာ တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
No. LTE and 4G are essentially the same format of mobile data and it is the best commercially available data standard in Myanmar. Specifically, 4G LTEmeans “fourth-generation long term evolution,” with LTEbeingatype of4Gthat delivers the fastest connection foramobile internet experience – up to 10 timesfaster than3G.
•App update settings: some apps interact at regular intervals with their servers to look for updates and notifications, location services, further increasing the amount of data being used. Check your Background App Refresh settings for IPhone and Settings/ Auto update app settings for Android.